Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ‘छक्का पञ्जा ३’ को गीतमा सिमित वर्षा – Emountain TV
काठमाडौं, ३१ जेठ । सुपरहिट फिल्म ‘छक्का पञ्जा’ को दुई सिरिजमा लिड रोलमा रहेकी अभिनेत्री वर्षा राउत ‘छक्का पञ्जा ३’ मा भने एक गीतमा मात्र सिमित हुने भएकी छिन् । निर्माण अगावैदेखि दर्शकमाझ प्रतिक्षीत रहेको यो फिल्मको हाल अन्तिम चरणको छायांकन भइरहेको छ ।
निर्देशक दीपाश्री निरौलाले ‘छक्का पञ्जा ३’ मा अभिनेत्री वर्षा राउत एक गीतमा देखिने जानकारी दिइन् । फिल्मीखबरसँगको फोनवार्तामा उनले भनिन्,हामी फिल्मको सम्पूर्ण दृश्य सकाएपछि गीत खिच्नेछौं । गीतमा वर्षा पनि देखिनेछिन् ।
उनका अनुसार, वर्षाको फिल्ममा एक गीतबाहेक अन्य सिन हुने छैन । रोचक कुरा त यो फिल्ममा उनका प्रेमी संजोग कोइरालाको पनि अभिनय छ । उनले आफ्नो भागको सिन भने भ्याइसकेका छन् । अभिनेता पुष्प खड्काले अन्तिम समयमा फिल्म नगर्ने निर्णय लिएपछि निर्माण टिमले उनको ठाउँमा संजोगलाई भित्राएको थियो ।
गएको शनिवार मात्र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले पनि यो फिल्म ज्वाइन गरेकी थिइन् । यसअघि उनी फिल्ममा हुने विषयमा निर्माण टिमले कुनै जानकारी दिएको थिएन । उनको एक गीत र केही सिन रहने बताइएको छ । यो फिल्ममा दीपकराज गिरी, दीपिका प्रसाईँ, जीतु नेपाल, केदार घिमिरे, बुद्धि तामाङ, नीर शाह, किरण केसी, संयोग कोइरालालगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहनेछ । छक्का पञ्जा ३ मा अभिनेत्री प्रियंका कार्की अतिथी भूमिकामा देखिनेछिन् । फिल्मीखवरबाट